(ကွာလာလမ်ပူ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ ၁.၀ ၁.၁ Malaysia: largest cities and towns and statistics of their population။ 16 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Kearney, Inc.၊ A.T.။ The 2010 Global Cities Index။ Foreign Policy။
↑ J.M. Gullick (1983). The Story of Kuala Lumpur, 1857-1939. Eastern Universities Press (M), 8–9. ISBN 978-9679080285။
↑ Kuala Lumpur History။ All Malaysia။ 15 September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွာလာလမ်ပူမြို့&oldid=460235" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။